Khatarta caafimaad ee macaaneeyaha macmalka ah | Bezzia
Tony Torres | 10/05/2022 20:00 | Nafaqeyn
Hubaal hal mar wax ka badan waxaad maqashay in macaaneeyayaasha macmalka ahi aanay caafimaad qabin. Sababtoo ah muddo dheer ayaa laga hadlayay saamaynta xun ee alaabtan caafimaad. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo la tixgelinayo in saccharin uu ka fiican yahay sonkorta, waxay sii socotaa in la isticmaalo iyada oo aan la tixgelineynin faa'iido darrada alaabtan caadiga ah.
Waqtigan oo cuntada aad loo daryeelo, oo dad badan oo aad u badan ay bartaan inay akhriyaan oo kala saaraan calaamadaha alaabta si ay u tuuraan kuwa ugu waxyeellada badan, maxaa diidaya in wax badan laga barto oo aan wax badan ka ogaan khataraha walxaha oo laga yaabo in mudnaanta koowaad ay u muuqato. aan waxyeello lahayn? Haddii aad ka mid tahay kuwa cabba kafeega iyo faleebooyinka macaan, waxaanu kugu martiqaadaynaa inaad ogaato khatarta caafimaad ee isticmaalkeeda.
1 Macmacaanadu khatar ma u yihiin caafimaadka?
1.1 Sida loo beddelo sonkorta hab caafimaad leh
Macmacaanadu khatar ma u yihiin caafimaadka?
Sida laga soo xigtay daraasado la sameeyay, isticmaalka joogtada ah ee macmacaanka macmalka ah waxay dhaawici kartaa bakteeriyada xiidmaha ee caafimaadka qabta ee jidhka ku jirta. Bakteeriyadani waa qayb ka mid ah microbiota mindhicirka waxayna door ku leedahay shaqada jidhka. Marka ay wax dhibaan iyaga, bakteeriyada caafimaadka qabtaa way bukoon kartaa oo khatar bay ku noqon kartaa caafimaadka.
Tani waa waxa daraasadda ku saabsan isticmaalka macmacaanka macmalka ah ay go'aamiso. Gaar ahaan, waxay bedeli karaan laba nooc oo bakteeriyada xiidmaha, E-coli iyo E-faecalis. Sida muuqata qaybaha qaar ka mid ah macaaneeyayaasha macmalka ah waxay bedeli kartaa tirada bakteeriyada la sheegay ama waxay soo saari kartaa nooc kale taas oo bedeli karta isku-dhafka dabiiciga ah ee microbiota mindhicirka.
Natiijo ahaan, bakteeriyadani waxay dhaawici kartaa darbiga mindhicirka, way dhaafi kartaa oo waxay gaari kartaa dhiigga. Bakteeriyadan jirran waxay ku soo degi kartaa oo ku urursan kartaa meelaha ay ka mid yihiin qanjidhada qanjidhada, beeryarada ama beerka iyo cawaaqibta ka dhalan karta waxay noqon kartaa mid aad khatar u ah. Dhibaatooyinka kale, dhammaan noocyada caabuqa ayaa dhici kara, oo ay ku jiraan mid ka mid ah kuwa ugu khatarta badan, septicaemia.
Sida loo beddelo sonkorta hab caafimaad leh
Markaad isticmaasho macaaneeye macmal ah, sababtoo ah waxaad dooneysaa inaad hoos u dhigto qaadashada sonkortaada. Ama sida qayb ka mid ah cunto caato ah ama sida hab cunto oo caafimaad leh. Horaa loo yiqiin khataraha sonkorta iyo balwaddeeda, laakiin wax yar ayay bilaabaan inay bilaabaan soo ogow khataraha alaabta macmalka ah sida macaanka. Sidaa darteed, way fiicantahay in la raadiyo siyaabo kale oo lagu macaaneeyo cuntada alaabada aan khatarta ku ahayn caafimaadka.
Tusaale macaan macaan dabiici ah waa timirta. Miro leh xaddi badan oo sonkor dabiici ah oo ku haboon macaanaynta macmacaanka guriga lagu sameeyo iyo macmacaanka iyada oo aan la isticmaalin sonkor. Dib u dhaca timirta ayaa ah in maadada sokorta ay ku badan tahay ay ka dhigto cunto kaloori badan. Markaa haddii aad doonayso in aad miisaan lumiso waa in aad u isticmaashaa si dhexdhexaad ah.
Si aad u macaanayso qaxwada ama faleebooyinka, waxaad isticmaali kartaa macaaneeyaha dabiiciga ah ee ugu fiican, sida malab ama sharoobada agave. Inkasta oo ay sidoo kale aad u caloric, sida qadar aad u yar ayaa ku filan macaan galaasku waa inaanu dhibaato badan yeelan, ilaa aad ka badato isticmaalka mooyaane. Marka laga hadlayo macaan-macmacaan, dhammaantood khatar isku si uma aha.
Ka mid ah fursadaha ugu fiican waa stevia taas oo ka timaadda dhirta, sidaas darteed waa dabiici, ama erythritol. Macmacaanka dabiiciga ah wuxuu ka yimaadaa cuntooyin badan sida galley ama boqoshaada, iyo kuwo kale. Xaalad kasta, ikhtiyaarka ugu fiican ayaa had iyo jeer ah in la doorto macaaneeyaha dabiiciga ah si looga fogaado isku-dhafka kiimikada ee waxyeellada u leh caafimaadka.
Ugu dambeyntii, xasuusnoow in sonkortu aysan ahayn wax aan ka badnayn maaddooyinka loo isticmaalo in lagu qariyo dhadhanka cuntada. Baro inaad ku raaxaysato dhadhanka dabiiciga ah ee alaabooyinka inta badan ku qarsoon inta u dhaxaysa xaddi badan oo sonkor ah iyo waxaad ogaan doontaa in afkaagu si tartiib tartiib ah ula qabsanayo iyaga. Dhawaan waxaad ku raaxaysan doontaa dhadhan badan oo kale oo aad ku cuni doontaa cunto caafimaad leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Nafaqeyn » Khatarta caafimaad ee macaaneeyaha macmalka ah